Barnaamijka Shaqo Qaran, Wuxuu U Baahanyahay Fikir Qaran | Hayaan News
Waxa dhawaan la soo gebo-gebeeyey barnaamijka sida wayn dawladdu iskaga xil saartay ee Shaqo Qaran oo tabo-bar lagu siiyo 1,500 qof oo qaab tartan furan ah looga soo kala xulay gobolada dalka oo dhan. Dadka tabo-barka qaatay qaybtooda ragga ah waxa la siiyay tabo-bar ciidan. Hanaanka caynkaas ah oo u eeg midkii dawladda Kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre ay ku ciidamayn jirtay dhalinyarada ka baxda dugsiyada sare ka hor intaanay gelin jaamacadaha, dad badan ayaa soo dhoweeyey in qaabka lagu qoray uu ahaa tartan ee aanu ahayn eexaysi iyo garabsi hoose.
Sidaasdarteed, talada biyo kama dhibcaanka ahi waxaay tahay in dawladdu samayso istiraajiyad shaqo abuur oo ku dhisan talada aqoon yahanka dhaqaale ee dalka si loogu helo maaro waarta shaqo la’aanta balaadhan ee haysta dhalinyarada dalka oo tiro ahaan sii kordhaysa. Si taas la mid ah ayay haboon tahay in dawladdu wax ka bedesho nidaamka aqoonta jamaacadaha si ay u noqdaan kuwo soo saara shaqaalaha suuqu u baahan yahay.